» दशै अगि मेलम्चीको को पानी खाने सपना सपना नै रहयो! मन्त्री ज्यु दशै त आइसक्यो तर खोइ पानी?? दशै अगि मेलम्चीको को पानी खाने सपना सपना नै रहयो! मन्त्री ज्यु दशै त आइसक्यो तर खोइ पानी?? – हाम्रो खबर
दशै अगि मेलम्चीको को पानी खाने सपना सपना नै रहयो! मन्त्री ज्यु दशै त आइसक्यो तर खोइ पानी??
2020, October 24th, Saturday
admin 952 Views
काठमाडौँ : यस वर्षको दशैँ एक महिना लम्बिएर आयो । सरकारी दाबीअनुसार यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाका धारामा मेलम्चीको पानी झर्नुपर्ने थियो तर बोनसमा एक महिना पाउँदा पनि मेलम्चीको पानी धारामा चुहिएन । यससँगै निर्धारित समयभन्दा तीन महिनाअगावै काम सकेर बोनस खाने ठेकेदार कम्पनीको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको छ ।